Tani waa sida Apple ay u horumarisay goleyaasha wadahadalka ee WWDC 2021 | Wararka IPhone
Sannadkii labaad oo isku xigta, shirkii sanadlaha ahaa ee horumarinta ee Apple (WWDC) waa in si habsami leh loo qabtaa. telematics. Ma dambi baa? SARS-CoV-2, kaas oo wax ka badal ku sameynayay qaab nololeedkeena iyo qorshooyinka shirkadda sanad iyo badh. Si kastaba ha noqotee, WWDC 2021 waxay horeyba khibrad uga heshay dhacdo telematics ah sanadkii hore. Dhab ahaan, Apple waxay hagaajineysaa dhammaan qaababka gudaha sida goleyaasha wadahadalka taas ayaa loo isticmaali doonaa inta lagu jiro shirka iyada oo ujeedadu tahay in la gaaro isdhexgalka ugu sarreeya ee u dhexeeya horumariyeyaasha iyo xirfadleyda Apple.
Apple waxay diyaarisaa shirarka dooda ee imaatinka WWDC 2021
Fagaarayaasha wadahadalka ayaa ah mid kamid ah aaladaha muhiimka ah ee shirarka horumariyaha. Maaddaama Apple ay sii deyneyso dhammaan tiknoolajiyadda cusub ee lagu dhisay iPadOS 15, iOS 15, iyo watchOS 8, oo ka mid ah nidaamyada kale ee hawlgalka, Horumariyayaashu waxay awoodi doonaan inay weydiiyaan su'aalo, kajawaabaan, lana falgalaan injineerada Apple si ay uga jawaabaan su'aalaha. Intaa waxaa dheer, tani waa waxa shirku ku saabsan yahay, iskuday inuu ka caawiyo abuurayaasha si toos ah API-yada cusub, wax ka qabashada caqabadaha cusub ee ka soo bixi doona fursado ahaan.
Dhowr saacadood ka hor, waxaan bilaabay a Cusboonaysiinta goobaha doodaha ee imaatinka WWDC 2021. Ujeeddada dhammaan isbeddeladan ayaa ah in la hagaajiyo habka horumariyayaashu ula xiriiraan oo ay u soo bandhigaan qalab cusub si ay ugu awoodaan inay ku maareeyaan farriimaha bar-kulannada qaab sax ah.
Xaqiiqdii, horumariyayaashu waxay xaqiijinayaan in badan oo ka mid ah astaamaha cusub ee lagu dhex daray goleyaal cusub waxay ku timid natiijada ka soo baxda jawaab celinta Apple ka heshay WWDC 2020. Kuwaani waa qaar ka mid ah Astaamo cusub oo lagu daray fagaarayaasha doodda:
Suurtagalnimada in lagu dhajiyo faallooyinka su'aalaha ama jawaabaha si loogu daro macluumaad dheeraad ah ama caddayn codsi.
Ku raadi waxyaabo badan oo tag ah, sii qeexitaanka raadinta.
Kudar oo maamul tagsyada aad jeceshahay.
Sawirrada u rar su'aalaha iyo jawaabaha si aad u siiso faahfaahinta taageeraya hadalka.
La tasho sharaxaadda sumadaha si aad u doorato midka ugu badan ee la xiriira su'aasha.
Kusoo qor barta aad ugu jeceshahay RSS si aad ugu darto barnaamijyada dhinac saddexaad oo aad ula socoto dibadda.
Ka fiiri su'aalaha, jawaabaha, iyo astaamaha aad ugu jeceshahay bogga hoyga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » WWDC 2021 » Tani waa sida Apple ay u horumarisay goleyaasha wadahadalka ee WWDC 2021
Xasilooni cusub oo hagaagsan oo loogu talagalay kamaradaha iPhone 13
WhatApp gadaal ayey u socotaa, mar dambe kuma xadidi doonto howlaha adeegsadayaasha aan aqbalin siyaasada cusub ee asturnaanta